Ebe ị ga -aga ezumike na Spain: Ebe ise na mba anyị | Akụkọ njem
Louis Martinez | | Ebe njegharị, España
Azịza ajụjụ a ebe aga ezumike na Spain ọ bụ otutu. Nke ahụ bụ, ọ naghị anabata otu azịza. Obodo anyị juputara na ebe mara mma iji nwee ọmarịcha ụbọchị ezumike. Site n'ebe ugwu nwere agwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ya, oke osimiri ya siri ike na nri dị ụtọ nke dị na ndịda yana ihu igwe na -atọ ya ụtọ, ọ joyụ nke ndị mmadụ na nnukwu aja aja, Spain niile kwesịrị nleta.
Na ihe a niile na -ekwughị akụkọ ihe mere eme Castilla y Aragon, anwụ na -acha Valencia (lee, anyị na -ahapụrụ gị akụkọ gbasara obodo a) ma ọ bụ otu Catalonia. Agbanyeghị, anyị ga -akwado ebe ise ịga ezumike na Spain.
1 Ebe ise pụrụ iche iji nọrọ ezumike echefu echefu
1.1 San Sebastián na ụsọ oké osimiri Basque
1.1.1 Basque n'ụsọ oké osimiri
1.2 Córdoba na obodo ya, n'etiti ebe dị mkpa iji nọrọ ezigbo ezumike
1.2.1 Obodo nke Córdoba
1.3 Murcia amabeghị, ebe ọzọ maka ezumike na Spain
1.4 Obodo Rodrigo
1.5 Obodo ndị dị na Soria
Ebe ise pụrụ iche iji nọrọ ezumike echefu echefu
Maka ihe niile anyị gwara gị, anyị ga -eme mbọ njikọ iji kwado ise n'ime ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe agaghị echefu echefu. ezumike na Spain. Anyị ga -ahụ na ha so na mpaghara niile nke obodo anyị nakwa na ha bụ ndị nnọchite anya enwere ike maka ụdịrị ihe dị iche iche.
San Sebastián na ụsọ oké osimiri Basque
Anyị ga -amalite ndụmọdụ anyị na ugwu Spain. Anyị nwere ike ịgwa gị gbasara nnukwu ihe ncheta Santander, site n'akụkọ ihe mere eme Asturias ma ọ bụ nke dị oke ọnụ ahịa Ụsọ osimiri Galician. Mana anyị họọrọ isi obodo Guipuzcoa n'ihi, n'echiche anyị, ọ bụ otu n'ime obodo mara mma na Spain.
Ọ bụghị ihe ndabakọ na ọ bụ otu n'ime ebe ezumike eleta eleta anya na akụkọ ntolite anyị niile. The dị oké ọnụ ahịa La Concha n'ọnụ mmiri, tinyere osimiri ya, bụ ebe ịsa ahụ ọbụna maka ndị eze na ọtụtụ ụlọ ya na -anabata ịma mma akụkọ ihe mere eme.
Ị nwere ike malite nleta gị na San Sebastián site akụkụ ochie, ya na ọdụ ụgbọ mmiri ya na okporo ụzọ ya dị wara wara nke jupụtara n'ụlọ nri ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ama ama nwachukwu. Anyị na -akwadokwa ka ị gaa na nnukwu basilica Baroque nke Santa María del Coro na ụlọ ụka Gothic nke San Vicente. Ị ga -ahụkwa na mpaghara a ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke San Telmo, na akụkọ Basque, na Naval. Ọzọkwa, echefula ịrịgo ugwu Urgull, ebe ị nwere ike nwee ekele maka echiche pụrụ iche nke n'ọnụ mmiri ahụ.
Agbanyeghị, ikekwe karịa ama ama bụ ugwu nke ọzọ na nsọtụ ọzọ nke La Concha. Anyị na -agwa gị gbasara ugwu Igueldo, nke, na mgbakwunye na odida obodo, ị nwere ogige ntụrụndụ n'ụdị belle oge na igwe na -agbagharị agbagharị. Iji ruo ebe ahụ, ịnwere ike iji funicular ochie, nke na -arụ ọrụ kemgbe 1912.
N'ikpeazụ, ị ga -ahụ oku na San Sebastián mpaghara ihunanya, nke dabara na mpaghara mgbasawanye nke obodo ahụ ma tinye ụlọ site na ngwụcha narị afọ nke iri na itoolu dịka ụlọ ochie nke Gran Casino, Victoria Eugenia Theatre ma ọ bụ Hotel María Cristina. Agbanyeghị, ikekwe ihe ngosi kacha ewu ewu na mpaghara a bụ Ezi katidral onye ọzụzụ atụrụ, nke e wuru na 1897 na-eso usoro cano-Gothic.
Basque n'ụsọ oké osimiri
Mana ihe ịtụnanya na ezumike na Guipúzcoa na -enye gị anaghị akwụsị na San Sebastián. Anyị na -adụ gị ọdụ ka ị gaa n'obodo ndị dị nso n'ụsọ osimiri Basque. Karịsịa, Hernani, nke ebe akụkọ ihe mere eme ya bụ saịtị nke mmasị ọdịbendị; Azcoitia, nwere ọtụtụ nnukwu ihe owuwu dịka ụlọ elu ya; Hondaribia, ya na nnukwu mgbidi ya ma ọ bụ obere obodo ịkụ azụ dịka Getaria ebe ị ga -ahụ ọmarịcha osimiri.
Córdoba na obodo ya, n'etiti ebe dị mkpa iji nọrọ ezigbo ezumike
Ọ bụrụ na ị na -eche ebe ị ga -aga ezumike na Spain, anyị ga -agwa gị ugbu a maka ebe ị ga -eleta opekata mpe na ndụ gị. Anyị na -ezo aka na Córdoba akụkọ ihe mere eme, yana ọdịnala Caliphate ya na nnukwu ihe ncheta ya. Ọ bụghị ihe ndabara na ọ bụ obodo nwere ọtụtụ aha Ihe Nketa Worldwa nke ụwa.
Ndị Rome tọrọ ntọala na narị afọ nke abụọ BC, Córdoba nwere ọtụtụ ihe ncheta site na oge niile, n'agbanyeghị na ọ dịrị ndụ n'oge ọchịchị ya dị n'okpuru ọchịchị Muslim, mgbe ọ bụ isi obodo Caliphate.
Ihe nkiri Roman, àkwà mmiri na ụlọ nsọ, n'etiti ihe owuwu ndị ọzọ, bụ nke oge Latin. Mana nnukwu akara obodo bụ ama Mosquelọ alakụba, wuru na narị afọ nke XNUMX na foduru nke otu ụlọ ụka Visigoth ochie. Site n'onwe ya, ọ ga -abụ ihe zuru oke ị ga -eleta Córdoba.
Ọbụlagodi taa, ọ bụ nke atọ kachasị na ụwa mgbe Mecca na ụlọ alakụba Istanbul gasịrị, n'agbanyeghị na ọ bụ katidral Katọlik ugbu a. N'ime ihe ị ga -ahụ n'ime ya bụ Patio de los Naranjos, ụlọ elu mgbịrịgba nke Renaissance, ọtụtụ ọnụ ụzọ dịka Postigo del Palacio ma ọ bụ Santa Catalina na ụlọ hypostyle a ma ama. Mana ọ bụkwa ukwe, nnukwu ebe ịchụ aja ma ọ bụ ihe dị egwu macura.
Dịka ị nwere ike chepụta, ụlọ alakụba abụghị naanị ihe ncheta sitere na oge ndị Alakụba ị nwere ike ịhụ na Córdoba. Igwe ihe igwe nri Guadalquivir ma ọ bụ ịsa ahụ Caliphate bụkwa nke ya. Mana nke kachasị mkpa bụ ịmanye Medina azahara.
Ọ dị ihe dịka kilomita asatọ site na Córdoba, n'okpuru ụkwụ Sierra Morena, bụ obodo palatine oge ochie nke caliph wuru Abdullah III. N'agbanyeghị afọ ndụ ya, a na -echekwa ya nke ọma. N'ime ihe ịtụnanya ị nwere ike ịhụ n'ime ya bụ Great Portico, ụlọ basilica nke dị n'elu, ụlọ bara ọgaranya ma ọ bụ ụlọ Jafar.
Nlele nke Almodóvar del Río
Ebe ọ bụ na ịnọ na Córdoba, anyị na -adụ gị ọdụ ka ị gaa na obodo dịka Montilla, ya na foduru ụlọ ochie ya; Utezọ, ya na ndị Arab fọdụrụnụ, na Priego, ya na agbata obi La Villa na Balcony nke Adarve. Mana ọzọkwa ebena, na ihe mgbe ochie ya; Zuheros, ebe ọgba nke ụsụ; Almodovar del Rio, ya na chọọchị narị afọ nke XNUMX, na hornachuelos, ya na obí ya na ubi nke Moratalla, nke a maara dị ka "Versailles nke Cordoba".
Murcia amabeghị, ebe ọzọ maka ezumike na Spain
Murcia (nke a na -akpọ Trapería), nnukwu ebe ịga ezumike na Spain
Murcia adịghị n'etiti ndị njem nlegharị anya na mba anyị. Agbanyeghị, ọ nwere ọtụtụ ihe inye gị. Ma anyị anaghị ekwu maka ọmarịcha osimiri ya, ọkachasị ndị dị na gburugburu ya Aka aka nke Mar Menor, ma ọ bụ ihu igwe na -ekpo ọkụ ma na -atọ ụtọ.
Isi obodo nke ógbè ahụ n'onwe ya nwere nnukwu ihe egwu dị egwu. Obodo ochie ya, gburugburu Kadịnal Belluga Square, nwere nnukwu mmasị. Enwere ya katidral nke santa maria, nke na -agwakọta Gothic, Renaissance na, karịa, ụdị Baroque. Na mgbakwunye, ụlọ elu mgbịrịgba ya dị egwu, elu 93 mita, bụ akara obodo.
N'akụkụ katidral, e nwere nke ochie Nnukwu ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke San Fulgencio na Episcopal obí, ma site na narị afọ nke XNUMX. Mana ị ga -ejegharịkwa n'okporo ụzọ ndị etiti na -eme njem, dịka ọla ọcha na Trapería. Na nke mbụ, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ụlọ ọgbara ọhụrụ dị ka ụlọ ahịa ngalaba ochie La Alegría de la Huerta, ebe nke abụọ, Almodóvar Palace na Gran Casino pụtara.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ọzọ dị mkpa na Murcia bụ Ebe obibi ndị mọnk nke Santa Clara la Real, n'ime ime ya, na mgbakwunye, bụ foduru nke Alcázar Soro, obí eze Arab site na narị afọ nke iri na atọ, nke ahụ na -enyekwa gị ebe ngosi nka nke nka dị nsọ na nka Andalus.
N'ikpeazụ, anyị na -adụkwa gị ọdụ ka ị hụ n'obodo Segura ya obí eze na ụlọ nke modernist. N'ime ndị mbụ, ndị nke Pérez-Calvillo, Vinader, Fontes na ezinụlọ Almudí. Na, gbasara nke ikpeazụ, Diaz-Cassou, Almansa, Guillamón na ụlọ ahịa Verónicas.
Kansụl Obodo nke Ciudad Rodrigo
Anyị agwala gị gbasara ebe ị ga -aga ezumike na Spain nke dị n'ebe ugwu, ndịda na ọwụwa anyanwụ. Anyị ga -eme ya ugbu a site na ọmarịcha obodo dị na ọdịda anyanwụ. Anyị na -ekwu maka Ciudad Rodrigo, ekwuputara ya niile Mgbanwe nke Artistical Historical.
Ịmata gị agaghị eju gị anya ma ọ bụrụ na anyị agwa gị na nnukwu ihe nketa ya na -amalite n'onwe ya rampi, nke a ka chekwara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ taa. Ugbua n'ime obodo, ị nwere ihe ịtụnanya dị ka ya ụlọ nke Henry II, nke e dere na narị afọ nke iri na anọ; nke Ụlọ Nzukọ Alaeze, Ụdị Renaissance, ma ọ bụ Assionlọ Ọgwụ Passion.
Mana ọ nwekwara Ciudad Rodrigo nwere ụkpụrụ ụlọ okpukpe dị mkpa. Ọ pụtara na ya katidral nke santa maria, Ọrụ Romanesque nke mgbanwe gaa na Gothic nke nnukwu ụlọ ụka ya nwere ọmarịcha ebe ịchụàjà Spanish-Flemish. I kwesịkwara ileta ụka San Andrés na San Cristóbal na ọmarịcha ihe Chapel nke Cerralbo, nke ụdị Herrerian, yana ebe obibi ndị nọnyebe San Agustín na Seminary nke San Cayetano.
N'ikpeazụ, ịlaghachi na nhazi ụlọ, anyị na -akwadokwa ka ị gaa na ụlọ Vázquez na Cadena na obí eze nke Marchioness nke Cartago na Águila na Ciudad Rodrigo.
Obodo ndị dị na Soria
Okporo ámá dị na Calatañazor
Ugbu a, anyị na -aga ime ime obodo Spain ịtụpụta njem site n'obodo Soria, ụfọdụ n'ime ha mara mma na mba ahụ. Anyị na -agwa gị gbasara obodo dịka Burg nke Osma, ya na nnukwu katidral Santa María de la Asunción, ụlọ ọgwụ de San Agustín ochie ya na nnukwu ụlọ ya, nke echekwara nke ya.
Mana anyị na -ekwu maka obodo dịka Asụsụ Catalañazor, nke na -ejigide amara ya mgbe mgbe ochie; Medinaceli, ya na nnukwu ụlọ ya, obí eze ya na ụlọ akwụkwọ kọleji ya, ma ọ bụ Ụlọ nkwakọba ihe, ya na nnukwu ihe nketa ndị Rom.
Na ọbụna ndị ọzọ amachaghị dị ka yanguas, nke nwekwara nnukwu ụlọ; rello, nke a kwadebere n'elu nkume nzu, ma ọ bụ Monteagudo nke Vicariates, nke, na enweghị ụlọ, nwere abụọ: La Raya na Obí Ụgwọ Ọrụ. Ihe a niile na -echefughị ​​ihe okike eke dị ka Vinuesa, dị n'okpuru ụkwụ elu ugwu Urbión na Laguna Negra a ma ama.
Na mmechi, anyị agwala gị ebe ise ebe aga ezumike na Spain. Mana ịba ụba na icheiche nke obodo anyị dị ukwuu nke na anyị nwere ike ịnye gị ọtụtụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, onye dị oke ọnụ ahịa Costa brava, njem nlegharị anya nke Obodo Cadiz (lee, inwere otu isiokwu banyere ha), nnukwu obodo nke Burgos ma ọ bụ Onye Galician Rías Altas y Bajas. Ọ bụ na ha eyighị ka ọmarịcha ebe maka gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Ebee ka ịga ezumike na Spain?